HIVOAKA NY VOLA VAOVAO AMBINY : Nampahafantarina manokana ireo olona sembana
Totomainty Jean Anicet, ‘chef de caisse’ ao amin’ny banky foiben’i Madagasikara no nanao fampahafantarana ireo olona manana fahasembanana, ireo vola vaovao ambiny dia ny arivo ariary, 500 ariary sy ariary zato, ny alatsinainy teo. 13 septembre 2017
Nampahafantarina azy ireo ny bika sy endrik’ireo vola vaovao ireo. Nampahalalana ihany koa fa mbola mandeha ny vola taloha mandra-pilazan’ny fanjakana fa tsy miasa intsony.
Nanamafy anefa izy fa na tsy miasa intsony aza ireo vola ireo, izany hoe tsy azo ividianan-javatra intsony dia mbola atakalon’ny banky foibe amin’ny sandany izany hoe, ny ariary 10 000 taloha atakalo ariary 10 000 vaovao, ny ariary 5 000 taloha atakalo ariary 5000 vaovao ary toy izany hatrany. Izany dia mba hialana amin’ny olona mamitaka.
Misy ireo olona manambaka ka vidiany vola vaovao amin’ny antsasa-bidiny ny vola taloha, indrindra any ambanivohitra any ka izany indrindra no ilàna ny fampahafantarana toy izao. Faly kosa ireo olonamanana fahasembanana amin’izao fijerena azy ireo manokana izao fa tsy natao natao ankilabao.